Lead Story – DVB
ကားတင်သွင်းခွင့်ပါမစ်အသစ်ထုတ်ပေးမှု ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ထိ ပိတ်ထားမည်
ကားတင်သွင်းခွင့်ပါမစ်မျိုးစုံ အသစ်ထုတ်ပေးတာကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ထိ ယာယီပိတ်ဖို့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက လုပ်ဆောင်နေပြီး အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ကို ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ အဆိုပါဌာနနဲ့ နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအဝန်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ကားအရောင်းစင်တာ Consignment နဲ့ အရောင်းပြခန်း CBU တွေကိုလည်း စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးပါမစ်လျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ SKD ကားတွေကတော့ သွင်းကုန်ပါမစ်မလိုဘဲ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာဈေးအပြောင်းအလဲမြင့်တက်နေတာကြောင့် ဈေးဖွင့်ဖို့အတွက် အခက်ခဲဖြစ်နေပြီး ရောင်းချမှုတွေကိုလည်း ရပ်ထားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။
စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနဟာ လိုင်စင်မဲ့ without ကားတွေကိုလည်း လိုင်စင်လုပ်ပေးဖို့ စီစဉ်နေပြီး စစ်ကောင်စီအနွယ်ဝင်တွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက် ဆက်နွှယ်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား တိုးတက်လာဖို့အတွက် စီစဉ်နေတာတယ်လို့ ဌာနတွင်း သတင်းအရင်းအမြစ်က ပြောပါတယ်။
တောင်ဒဂုံရှိ စစ်တပ်ပိုင် Mytel တာဝါတိုင် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ် (၅၆) ရပ်ကွက်၊ စမ်းမြရန်ချယ် ၃ လမ်းနဲ့ နဝရက်ကိုးသွယ်လမ်းအနီးရှိ စစ်တပ်ပိုင် Mytel တာဝါတိုင်ကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ဒီ ညနေ ၃ နာရီ ၄၇ မိနစ်မှာ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ G-20 UBPO အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေတဲ့ နေရာတွေကို အခုလို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်ပါးစေ စစ်သားတွေ၊ ရဲတွေနဲ့ သတင်းပေးဒလန်တွေကို အမြစ်ပြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့လည်း G-20 UBPO ကြေညာထားပါတယ်။
G-20 UBPO အဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ကလည်း သာကေတမြို့နယ် ၄/တောင်ရပ်ကွက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သလို စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ကလည်း ဒေါပုံလျှပ်စစ် မီတာရုံးနဲ့ သာကေတမြို့နယ် ရဲကင်းတစ်ခုကို ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
မြောင်မြို့နယ် မကျည်းဘုတ်ကျေးရွာက နေအိမ် ၃ လုံးကို စစ်‌ကောင်စီတပ်မီးရှို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ မကျည်းဘုတ်ကျေးရွာက နေအိမ် ၃ လုံးကို ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်မှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က မီးရှို့သွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီကနေ သိရပါတယ်။
ကျေးရွာသားတစ်ဦးက “နေအိမ် ၃ လုံး မီးရှို့ခံလိုက်ရတယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်ရှို့တာလဲဆိုတော့ သူတို့လာရှာတဲ့သူမမိလို့ နေအိမ်ကိုမီးရှို့တာ။ ဒီကောင်တွေ မိုက်ရိုင်းတယ်ဗျ။ ရွာသားနှစ်ဦးကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီး စစ်ဆေးတာတွေလည်း လုပ်သွားသလို ရိုက်နှက်တာတွေလည်း လုပ်သွားကြတယ်ဗျ” လို့ ပြောပါတယ်။
မကျည်းဘုတ်ရွာကို မနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကလည်း ဒလန်နှစ်ဦးပါဝင်ပြီး ကျေးရွာတွင်း ရှာဖွေတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့သလို ဒီနေ့မှာ တစ်ကြော့ပြန် လာရောက်ရှာဖွေကာ လူနေအိမ်ပါ မီးရှို့တာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ မီးရှို့ခံရတဲ့သူရဲ့အိမ်ဟာ ဦးထွန်းမြင့်နဲ့ အမည်မသိသူ နှစ်အိမ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲလူတွေဟာ မိရိုးဖလာ တောင်သူလုပ်ငန်းနဲ့ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ တွေဖြစ်ပြီး အခုလိုမီးရှို့ခံရတာဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမတည့်လို့ သတင်းပေးတိုင်ကြားတာ‌ကြောင့် စစ်ကောင်စီကလာပြီး မီးရှို့တာလို့ ဒေသခံရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
ကျီကုန်းရွာက ရဲမိသားစုဝင် ၅ ဦးအလောင်း ၆ ရက်ကြာအထိ သင်္ဂြိုဟ်ပေးမည့်သူမရှိဖြစ်နေ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ကျီးကုန်းရွာမှာ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် ညပိုင်းက သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ ရဲမိသားစုဝင် ၅ ဦးရဲ့သေဆုံးရုပ်အလောင်းတွေကို သင်္ဂြိုဟ်ပေးမယ့်သူ မရှိ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
“သေဆုံးသူ ရဲမိသားစု အလောင်းတွေကို အခုချိန်ထိ လာမကောက်သေးပါဘူး။ အလောင်း တွေက ပုပ်ပွနေပြီး ခွေးစား ကျီးထိုးနေတယ်။ သေဆုံးနေတဲ့ နွားတွေရောပဲ။ ကျီကုန်းရွာဟာ သုသာန်တစပြင်လိုဖြစ်နေတယ်။ သတင်းတွေမှာတော့ ရဲမိသားစု ၄ ဦးလို့ ပါတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ တကယ်နေတာက မိသားစု ၅ ဦးပါ။ သူတို့အားလုံး သေသွားတာပါ” လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောပါတယ်။
ဦးရဲမြင့်၊ မစန်းလှိုင်၊ ကေခိုင်ဦး(သမီးအကြီး)၊ ချောစုလှိုင်၊ ကျော့မှူးကေသွယ် စတဲ့ မိသားစု ၅ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဘယ်အဖွဲ့က လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ရဲမိသားစု အသတ်ခံရပြီးနောက် ကျီကုန်း တောင်ရွာကို စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ အရပ်ဝတ်ရဲနဲ့ စစ်သားတွေလာရောက်ပြီး ငါတို့က PDF တွေကွဆိုပြီး စတင်မီးရှို့ခဲ့လို့ NLD ထောက်ခံသူတွေရဲ့နေအိမ် ၁၈ လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့မနက်ပိုင်မှာလည်း ဒုတိယအကြိမ် မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက် နေအိမ် ၅ လုံးထပ်မံ မီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ကျီကုန်းတောင်ရွာဟာ အိမ်ခြေ ၅၀ လောက်ရှိပြီး စစ်တပ်က မီးရှို့ခဲ့လို့ နေအိမ် ၂၃ လုံးနဲ့ စပါးကျီတွေရော မီးလောင်ကျွမ်းကာ စပါးတင်းရေ ၃၀၀၀ လောက် ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နေအိမ်မီးရှို့ခံရတဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေက သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း တွေဆီ တိမ်းရှောင်နေကြရပြီး စစ်တပ်က မကြာခဏ လာရောက်နေလို့ အခုချိန်အထိ ရွာမပြန်ရဲသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Mytel တာဝါတိုင်မိုင်းခွဲခံရသည့် ချောင်းကြီးကျေးရွာကို စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ပြီး ရွာသားများကို ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ ချောင်းကြီးကျေးရွာကို စစ်ကောင်စီတပ်တွေက စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်ကစတင်ဝင်ရောက် ယာယီတပ်စခန်းချထားကာ Mytel တာဝါတိုင် မိုင်းခွဲခံရတဲ့ကိစ္စ ရွာသားတွေကို ဖမ်းဆီးရိုက်နှက် စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က ချောင်းကြီးကျေးရွာအနောက်ဘက် သုသာန်အနီးရှိ စစ်တပ်ပိုင် Mytel တာဝါတိုင် မိုင်းခွဲခံရပြီးနောက် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ စစ်တပ်တွေ ဝင်ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချောင်းကြီးကျေးရွာမှာ ယာယီတပ်စခန်းချပြီးနောက် ဧည့်စာရင်းစစ်တာ၊ တယ်လီဖုန်းတွေ စစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်နေပြီး ရွာသားတချို့ကိုတော့ နေအိမ်အတွင်း လိုက်လံဖမ်းဆီးကာ ရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ကနဦး သိရပါတယ်။.
ဒေသခံတစ်ဦးက “ချောင်းကြီးရဲကင်းကို ကင်းတဲဆောက်ထားတယ်၊ အဲဒီရွာမှာ ဧည့်စာရင်းတွေ စစ်တာတွေ ဖုန်းတွေ စစ်တာတွေ ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလည်း ရှိတယ်ကြားတယ်။ ရွာမှာ တပ်စွဲထားတော့ ရွာသားတွေ ကြောက်လန့်ပြီး အပြင်ကို မထွက်ရဲကြဘဲ တရွာလုံး တိတ်ဆိတ်နေတယ်'' လို့ပြောပါတယ်။
ချောင်းကြီးကျေးရွာ ရဲကင်းထိပ်မှာ ရဲကင်းအခိုင်အမာတည်ကာ စစ်ကား ၂၀ စီးခန့်၊ အင်အား ၃၀၀ လောက်နဲ့ တပ်စွဲထားတဲ့အပြင် ချောင်းကြီးဝါးစခန်း စာသင်ကျောင်းဝန်းအတွင်းနဲ့ ငါးတန့်အိုင်ကျေးရွာအနီးမှာလည်း အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ တပ်စွဲထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်တွေ တပ်စွဲထားတဲ့အတွက် အနီးဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာတွေမှာ ဒေသခံတွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းထားရပြီး ပြည်သူလူထုတွေ စိုးရိမ်ကြီးစွာ နေထိုင်နေ ရပါတယ်။
သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က ချောင်းကြီးကျေးရွာအနီးရှိ Mytel တာဝါ မိုင်းခွဲခံရပြီး စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်မှာလည်း ဖယ်ရှည်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ် မိုင်းခွဲခံရပါတယ်။
အစိုးရနှစ်ဖွဲ့က မြန်မာ့နေရာအတွက် ကုလသမဂ္ဂမှာ တောင်းဆိုထားရာ၊ ဘယ်သူ ရပါသလဲ
နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂမှာ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ဒီလအတွင်း အထွေထွေညီလာခံ အစည်းအဝေး ထိုင်ကြတဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်သူ ကိုယ်စားပြုသင့်သလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မတင်မကျ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ တခြား နေရာတွေမှာ သံတမန်တွေ ခန့်အပ်ဖို့ တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့သူ့မှာ အာဏာရှိသင့်တယ်လို့ ပြောဆိုထားတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့ ယခင်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုး ရ(NUG) ကို နိုင်ငံပြင်ပမှာ ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပါပြီ။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်း တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့သံတမန်တွေကို ခန့်အပ်သင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်က အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး စစ်အစိုးရကို ဝေဖန်နေတဲ့ လက်ရှိသံတမန် ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပဲ ဆက်လက်ခန့်ထားဖို့ အထွေထွေညီလာခံကို စာပေးပို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်သူက မြန်မာကို ကမ္ဘာ့စင်မြင့်မှာ ကိုယ်စားပြုမလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူက အထက်စီးမှာရှိနေလဲဆိုတာ ဘာကြောင့် အရေးကြီးနေပါသလဲ။
လက်ရှိမှာ စစ်အစိုးရဟာ လူ ၁,၁၀၀ ကျော် သတ်ဖြတ်ပြီး ၆,၆၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးထားကာ ရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေကို ပုန်းအောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းက ထွက်ပြေးစေပါတယ်။ အဲဒီလို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေကို ဖိနှိပ်မှုနဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို ဧပြီလထဲမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ အဓိကခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးကတော့ ဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ ဖြစ်ပြီး အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အများအားဖြင့် အသွင်သဏ္ဍာန်သဘောသာရှိပါတယ်။
ကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ ကရင်တိုင်းရင်းသားနဲ့ ခရစ်ယာန် နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သူ ယာယီဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းနဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သူ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးအများအပြားဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အစိုးရရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမှာ ယခင်ကထက် အားလုံး ပါဝင်နေတဲ့ အမြင်မျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီအပြင် ကျယ်ပြန့်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကိုလည်း ပိုပြီးပါဝင်နိုင်ဖို့ ဝန်ကြီးဌာနတွေကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ ထင်ရှားတာကတော့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှာ ရိုဟင်ဂျာအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တယောက်ကို အကြံပေးအဖြစ် ခန့်အပ်ထားခဲ့တာပါပဲ။
နိုင်ငံအများစုက စစ်တပ်ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြပေမဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိရေးကလည်း ခက်ခဲနေကြဆဲပါပဲ။
ထပ်မံ၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းရာမှာ နှစ်ကြာရှည် ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဖယ်ထုတ်ထားသော အငြင်းပွားဖွယ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ပြောင်းပြန်လှန်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာ အခြေအနေကို မဟာဗျူဟာမြောက် ပါးပါးနပ်နပ် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်တရားရုံး(အိုင်စီစီ)ကနေ တရားစီရင်မှုကို လက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်တရားရုံး (အိုင်စီစီ) ရော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုတရားရုံး (အိုင်စီဂျေ) နှစ်ခုစလုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ကျူးလွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
အဲဒီအရာတွေကတော့ ယခင်အစိုးရရဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ထောက်ခံဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှန်တကယ်ပဲ ခါးသီးစရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ယခင်အချိန်တုန်းက စစ်တပ်ရဲ့ မောင်းထုတ်မှုကြောင့် ရာနဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ သူတို့နေရပ်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကာကွယ်ခဲ့ပြီး လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု မမြောက်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ ရွှေ့ကွက်ကတော့ နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရအောင် ကြံဆစီမံခြင်းပါပဲ။ အဓိကအားဖြင့် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရဲ့ ဖိအားကလည်း ရှိနေတာပါ။ သံတမန်ရေးနဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ထောက်ပံ့မှုတွေကို ပြည်ပရောက်အစိုးရကို မပေးခင် ကွန်ဂရက်မှာ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစုံတခု ပြောဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
ကုလမဂ္ဂကို ရွှေ့လာတဲ့ သံတမန်ရေးတိုက်ပွဲ အသိအမှတ်ပြုရေးတိုက်ပွဲရဲ့ အဓိကဆုလာဘ်တော့ ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာကို ကိုယ်စားပြုမယ့်နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်မြန်မာ့အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ သဘောဆန္ဒကို ထင်ဟပ်စေတဲ့အလျောက် အဲဒီနေရာဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက်ကတော့ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေက အထောက်အကူပေးထားပြီးသားပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ အထောက်အထားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားစရာရှိလာရင် လက်ရှိ တာဝန်ယူနေတဲ့ သံတမန်ကိုပဲ ဆက်ထားဖို့ စည်းမျဉ်းတွေက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကတော့ အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ရှိ အထွေထွေညီလာခံမှာ ချမှတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် အပေးအယူညှိနိုင်းမှု (တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ရုရှား၊ အာဆီယံ၊ ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ သဘောတူညီမှုနဲ့အတူ)အရ ညီလာခံမှာ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ကို တက်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ လက်ရှိ သံတမန် ဦးကျော်မိုးထွန်းကပဲ အထွေထွေညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ ပါဝင်တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်တို့ သဘောတူညီချက်မှာ သူ့ကို စစ်တပ်အပေါ် ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတွေ သုံးစွဲတာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက်တော့ ကြီးမားတဲ့ အောင်ပွဲတခုပါပဲ။
အမေရိကန်၊ တရုတ်နဲ့ ရုရှား တို့ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးပါ အထောက်အထားစိစစ်ရေးကော်မတီက နိုဝင်ဘာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုလသမဂ္ဂနေရာကို တရားဝင်ဘယ်သူ ရယူမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေစဉ်မှာပဲ၊ တပြိုင်နက်တည်း စစ်အစိုးရအပေါ် လူထုခုခံရေးစစ်ပွဲကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့နှစ်တွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းမဖက်ရေး နည်းနာကို ကျောခိုင်းလိုက်တာပါပဲ။
မြန်မာပြည်ရှိ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်သံရုံးတွေက ဝေဖန်သံတွေ တိတ်နေပေမဲ့ အခုလို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်တာဟာ တချို့ရပ်ဝန်းတွေမှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်စေပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူလူထုက ဒီအဖြေကို အပူတပြင်းထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ် နားလည်မိနေစဉ်မှာပဲ၊ လေ့ကျင့်မထားတဲ့ လက်နက်မပြည့်မစုံ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အရပ်သားတွေဟာ စစ်တပ်အပေါ် တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူဖို့ရာမှာ သေချာမှုနဲ့ ဝေးနေပါသေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ လက်ရှိ မြို့ပြတွေက စုဆောင်းထားတဲ့ အရပ်သားတွေအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သက်သေတချို့ရှိ နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းတလျှောက် သိသာလှတဲ့ အသေအပျောက်နှုန်းတွေအားဖြင့် ပြေလည်ဖို့ အဆင်ပြေစရာ မရှိပါဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ပွဲဟာ တခုတည်းသော ရွေးချယ်စရာအဖြစ် လူထုက ခံစားနေရပါတယ်။ တကယ်တော့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူလူထုအကြား ကာလရှည်ကြာ ပဋိပက္ခတွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ပြေလည်မှုရရှိရေးဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ရဲ့ အစောပိုင်းအချိန်တခဏမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဝင်းမြင့်တို့ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရကတည်းက ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။
( ဩစတြေးလျအခြေစိုက် theconversation.com ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ South Australia တက္ကသိုလ်ဝါရင့်ကထိက အဒမ်ဆင်မ်စန် ရေးသားတဲ့ Two governments claim to run Myanmar. So, who gets the country’s seat at the UN? ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ )
Ref: The Conversation
ထိုင်းတွင် လူနာပို့ယာဉ် တံတားအောက်ရေထဲထိုးကျသဖြင့် ၁ ဦး သေဆုံး၊ ၁ ဦးပျောက်ဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ နခွမ်းဆဝမ်ခရိုင်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မနက်က ရေကြီးပြီး ထက်ပိုင်းကျိုးကျနေတဲ့ တံတားတစင်းပေါ်ကို လူနာတင်လာတဲ့ ယာဉ်တစ်စီး ဖြတ်မောင်းရာမှ ရေထဲ ထိုးကျသွားပြီး ယာဉ်မောင်း ရေစီးထဲမျောပါပျောက်ဆုံးကာ လူနာလည်း သေဆုံးသွားတယ်လို့ khaosod ထိုင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
နခွမ်းဆဝမ်ခရိုင် လတ်ယောင်းမြို့နယ်ရှိ မဲ့ဝုန်း - လတ်ယောင်းလမ်းမကြီးပေါ်က တံတား တစ်စင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ရေကြီးမှုကြောင့် ထက်ပိုင်းကျိုးကျနေတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ရေကြီးနေလို့ တံတားမပြုပြင်နိုင်သေးခင် သတိပေးဆိုင်းဘုတ်ရေးထားပေမဲ့ ဒီမနက် ၁၀ နာရီလောက်က အီဇူးစူးဟိုင်းလပ်ကားတစ်စီးဟာ အရှိန်နဲ့မောင်းနှင်လာပြီး ကျိုးနေတဲ့ တံတားနားရောက်တော့ ရေထဲ ထိုးကျသွားတာလို့ မျက်မြင်တွေက ပြောပါတယ်။
အဆိုပါကားပေါ်မှာ နေမကောင်းလို့ အသည်းအသန်ဖြစ်နေတဲ့ အဘွားကြီးတစ်ယောက်၊ သူ့ရဲ့ မြေးမလေးနဲ့ သမီးဖြစ်သူတို့လိုက်ပါလာကြောင်း၊ သမီးဖြစ်သူက ကားမောင်းကာ ဆေးရုံကိုအမြန်သွားဖို့ အရှိန်နဲ့ မောင်းနှင်လာစဉ် ခုလိုမတော်တဆဖြစ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ကားဟာ ရေထဲကို ၉၀ ဒီဂရီနီးပါးထိုးကျနေတာကြောင့် အနီးနားရှိလူတွေက ကူညီဖို့နည်းလမ်းရှာဖွေစဉ် ကားမောင်းတဲ့အမျိုးသမီးက တံခါးဖွင့်ဆင်းလာကြောင်း၊ သူဟာရေထဲ ကျသွားပြီး လူတွေက သူ့ကို ဆွဲတင်ဖို့လုပ်နေတုန်း ရေစီးကြောင်းနဲ့အတူ မျောပါပျောက်ဆုံး သွားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရောက်လာပြီး ကားကိုဆွဲတင်ရာမှာတော့ ကားနောက်ခန်းရှိ လူမမာ အဘွားအိုလည်း သေဆုံးနေပြီလို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်း နခွန်းရာ့ချ်ဆီမားမြို့နယ် ခုတ်ဆုန် - လမ်းချိန်းကရိုင်း လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဒီနေ့မနက်က အရှည် ၁ ကီလိုမီတာလောက် ရေကျော်နေတာကြောင့် ဘတ်စ်ကားတစ်စီး ဘေးစောင်းလဲကျပြီး ရေစီးထဲပါသွားမလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းနဲ့ ယာဉ်နောက်လိုက် ၁ ဦးကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက အချိန်မီကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ ဒီကားဟာ ကုမ္ပဏီတခုက ဝန်ထမ်းတွေကို လုပ်ငန်းခွင်သွားပို့ခဲ့ပြီးအပြန်မှာ မတော်တဆဖြစ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
မုံးကိုးတွင် အရပ်သားပြည်သူနှစ်ဦး လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မုံးကိုးမြို့နယ်၊ ဖောင်းဆိုင်ဒေသကို သံလွင်မြစ် အရှေ့ဘက်ခြမ်း၊ လောက်ကိုင်ဘက်ကနေ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မုံးကိုးမြို့နယ်၊ ပူဝမ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်ခါးကျေးရွာရှိ ဦးတန်ဂွန်းရဲ့ နေအိမ်ကို လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက် ထိမှန်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးနဲ့ သားဖြစ်သူတို့ ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဦးတန်ဂွန်းရဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်သူ ဒေါ်လဘန်ရွယ်က ခြေထောက်မှာ ထိမှန်ပြီး သားဖြစ်သူ အသက် ၉ နှစ် အရွယ်ရှိ မာဘုံကိုတော့ ဦးခေါင်း၊ နား အရင်းနား၊ ကိုယ်နဲ့ ခြေထောက်တွေမှာရော လက်နက်ကြီးကျည်စ ထိမှန်သွားတာကြောင့် ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီး စိုးရိမ်ရတယ်လို့ ဒေသခံက ပြောပါတယ်။
“ခုကလေးက အရမ်းစိုးရိမ်ရတယ်။ မျက်စိနားမှာရော၊ ကိုယ်မှာရော၊ နားရင်းနားမှာရော ထိသွားတယ်။ နား နားကတော့ ထုတ်(ကျည်စ) လို့ မရသေးဘူး။ ခု ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို သွားခေါ်နေတုန်း။ အဲဒီ ဆရာဝန် ရောက်လာမှ ထုတ်လို့ရမှာ။”
စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာလည်း မုံးကိုးဘက် စစ်ကောင်စီအဖွဲ့က မုံးကိုး ဖော်မော်၊ မန်ဂျက်တို့ဘက်ကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ရမ်းသမ်း ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ညနေပိုင်း ၄ နာရီကျော်လောက်မှာတော့ ကြူကုန် (ပန်ဆိုင်း) ဘက်ကနေ မုံးကိုးဘက် အင်အားဖြည့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ စစ်ကောင်စီကား ၁၁ စီး အဖွဲ့ကို ကိုးကန့် MNDAA အဖွဲ့က မုံးကိုး မရောက်ခင် နမ့်ဆူရွာဘက်က တံတားမှာ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့် လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ အနီးနား ရွာခံတွေက ပြောပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၅ နဲ့ ၂၆ ရက် နှစ်ရက်လုံးမှာ စစ်ကောင်စီတပ် အနေနဲ့ ကိုးကန့် MNDAA တပ်စိုက်ရာ မုံးကိုးဘက်ကို ထိုးစစ်ဆင်လာတယ်လို့ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ နေ့လယ် ကိုးကန့် သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီနဲ့ ကိုးကန့် MNDAA တို့အကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားတာကြောင့် မုံးကိုးမြို့နယ်နဲ့ ကြူကုတ် (ပန်ဆိုင်း) မြို့နယ်မှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၂၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရသူ ၃ ဦး၊ လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန် သေဆုံးသွားတဲ့ အရပ်သားပြည်သူ ၆ ဦး၊ မိုင်းနင်းမိ သေဆုံးသွားသူ ၁ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုတလင်မြို့နယ်တွင် စစ်ယာဉ်တန်း မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ လက်ပံကျေးရွာအနီး၊ စိုင်ပြင်မြို့နယ်စပ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ ကား ၁၃ စီးပါ စစ်ယာဉ်တန်း စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ဒီမနက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီကနေ သိရပါတယ်။
ဘုတလင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက “မုံရွာဘက်ကနေ ရေဦး၊ တန့်ဆည်ဘက်တက်လာတဲ့ကား ၁၃ စီး တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဗျ။ ဘယ်နှစီးထိတယ်လို့တော့ အတိကျမသိရဘူး။ တနေရာထဲမဟုတ်တော့ ဆွဲပြီးပြေးရတာဆိုတော့ လှည့်ကို မကြည့်နိုင်ကြဘူး။ မြေပြင်လုပ်‌နေတဲ့ သူ‌တွေကတော့ သုံးစီး ထိတယ်လို့လည်း ပြောတယ်။ သေဆုံးတာကတော့ မသိဘူးဗျ”လို့ ပြောပါတယ်။
မိုင်းပေါက်ကွဲရာနေရာမှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက အနီးဝန်းကျင်ကို လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ရမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စိုင်ပြင်မြို့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီး မုံရွာ၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်သွားကားလမ်းမကို ပိတ်ပြီး စစ်ဆေးနေကာ လမ်းသွားလမ်းလာ ဒေသခံရွာသားတွေကို ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လည်း နယ်မြေခံတွေဆီကနေ သိရပါတယ်။
ခင်ဦးမြို့နယ်က ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ စည်းရုံးရေးမှူး ၁ ဦး ပစ်သတ်ခံရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ သရက်ပင်စုကျေးရွာနေ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ စည်းရုံးရေးမှူး တယောက်ကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ဒီနေ့မနက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ ခင်ဦးစားချစ်ညိုအဖွဲ့က အတည်ပြုပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ သရက်ပင်စုကျေးရွာက အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ကိုဝင်းသူရ ဖြစ်ပြီး သရက်ပင်စုကျေးရွာနဲ့ အင်းပတ်ကျေးရွာကြား ခင်ဦး-ရေဦး ကားလမ်းပေါ်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ သုံးချက်နဲ့ သေဆုံးနေတာလို့ သိရပါတယ်။
ဒေသခံတစ်ဦးက “ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ စည်းရုံးရေးမှူးလည်း ဖြစ်တယ်။ ပျူစောထီးအဖွဲ့လည်း ဝင်ထားတယ်။ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ပါတီစည်းရုံးရေးမှာ သူကိုယ်တိုင် ဂုဏ်ယူပြီးပြောဆို‌လေ့ရှိတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလလောက်က သူနဲ့မတည့်တဲ့ (ရန်ငြိုးရှိတဲ့)ဘုန်းကြီး ကျောင်းကို လက်နက်လုပ်တယ်ဆိုပြီး သတင်းပေးခဲ့လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လာရှာ မွှေနှောက်သေး တယ်။ ဘာမှမတွေ့တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဆန်ပိုင်းတွေ။ ဆီပုံးတွေကို စစ်တပ်က သယ်သွားတာလည်း ခံရဘူးတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ခင်ဦးစားချစ်ညိုအဖွဲ့ဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပါမကျန်တော်လှန် တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ အသိပေးကြေညာထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က LGBT သပိတ် (ဓာတ်ပုံ)
ရန်ကုန်မြို့၊ သာကေတစျေးထဲမှာ LGBT သပိတ်ကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပဲယင်း စည်ပင်ရုံးအနီး လူငယ် ၁ ဦး မိုင်းစထိမှန်သေဆုံး
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်းမြို့၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးရုံးအနီး နောက်ဘေးလမ်းမှာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် ညနေ ၃ နာရီက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး လူငယ် ၁ ဦး မိုင်းစထိမှန်ကာ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဒီပဲယင်းမြို့ခံတွေထံက သိရပါတယ်။
မျက်မြင်တွေ့သူတစ်ဦးက “အသက်က ၃၀ လောက်ဖြစ်ဖို့ များတယ်ဗျ။ လူငယ်ပဲဗျ။ စည်ပင်ရုံး ခြံစည်းရိုးဘေးမှာ မိုင်းထောင်ရင်း သူ့မိုင်းနဲ့သူ ပေါက်ကွဲပြီး သေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းရတာပဲဗျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သေဆုံးတဲ့အနီးမှာ ပေါက်ကွဲထားတဲ့ မြေကြီးတွေ ကျင်းခွက်နေတာ တွေ့ရတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
မိုင်းထိမှန်တဲ့ လူငယ်ဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို မသိရသေးသလို မိုင်ထောင်သူ ဟုတ်မဟုတ် သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ဒီပဲယင်းမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့် ဒေသခံရွာသားတွေဟာ ရရာလက်နက်ကိုင်ဆောင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ရင်း အသက်ပေးနေရသူတွေ အများအပြားရှိနေပြီလို့ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်တပ်နှင့် PDF တို့ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟုမ္မလင်းမြိုနယ် နောင်ပိုအောင်ကျေးရွာရှိ ဥရုချောင်းကူးတံတားပေါ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် မနက်ပိုင်းအချိန်က စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ နောင်ပိုအောင် PDF တို့ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာ မနက်အစောပိုင်းက နောင်ပိုအောင်မှာရှိတဲ့ PDF အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက် စီးနင်းခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာ အပြန်အလှန်ပစ်တာလို့ သိရပါတယ်။
“အခုမနက်ခင်းအစောပိုင်းစစ်ကောင်စီက နောင်ပိုအောင်ရှိတဲ့ PDFစခန်းတစ်ခုဝင်စီးတယ်။ အဲဒီမှာ ဝင်စီးပြီးမကြာဘူး ဥရုတံတားပေါ်မှာ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွါးခဲ့တယ်။ နှစ်ဖက် အကျအဆုံးကတော့ မကြားမိဘူး။” ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်မရှိဘဲ ဥရုတံတားပေါကို စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ အင်အားအများအပြားရောက်လာပြီး တံတားကို ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပေးတော့ပဲ ပိတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာ နောင်ပိုအောင်ကျေးရွာအတွင်းမှာ လိုက်လံစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ကေအန်ယူနယ်မြေအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်များ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်
စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်စဲကြောင်း စစ်ကောင်စီက တဖက်မှာ ကြေညာထားပြီး တခြားတဖက်မှာတော့ ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ၊ ကေအန်ယူ တပ်မဟာ ၃ ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကို စစ်ကောင်စီတပ် အင်းအား ၂၀၀ နီးပါးနဲ့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ကေအန်ယူ တပ်မဟာ ၃ ၊ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၈ ကို မုန်းဒေသအခြေစိုက် စစ်ကောင်စီရဲ့ ခြေမြန်တပ်ရင်း ၅၉၉ က ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးနဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ သတင်းတွေကြောင့် လူအင်အားဖြည့်တင်းပြီး ဝင်ရောက်လာတာလို့ ကေအန်ယူ တပ်မဟာ ၃၊ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မုန်းဒေသအခြေစိုက် ၅၉၉ တပ်ရင်းက ဗိုလ်ကြီးနဲ့ စစ်သားတွေ သွားခိုလှုံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေတွေကြောင့် တပ်ရင်း ၈ ဘက်ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အင်းအားတိုးချဲ့တာဖြစ်နိုင်သလို တပ်ဖွဲ့အင်အားဆယ်ဂဏန်းသာရှိတဲ့ ကြောင်ပြာတပ်စခန်းကို ဝင်ရောက်လာတာဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု မဟုတ်ဘူးလို့ ကေအန်ယူ တာဝန်ရှိသူက ဆိုပါတယ်။
"ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့် တပ်စခန်းကို အင်အားတိုးပြီး လှုပ်ရှားလာတာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ နောက်ဆက်တွဲ သေချာမသိရသေးဘူး"လို့ ပဲခူးတိုင်း ဂျေအန်စီ တာဝန်ရှိသူက ဆိုပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်တာအတွင်း ကေအန်ယူ တပ်မဟာ ၃ တပ်ရင်း ၉ နယ်မြေမှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ တိုက်ပွဲပေါင်း ၉ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ စစ်ကောင်စီဘက်က ထိခိုက်ကျဆုံးမှုတွေများတဲ့အတွက် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ ကေအန်ယူက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နိုင်ငံတဝန်းထိုးစစ်ဆင်နေပြီး ပြည်သူလူထုကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်က စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ၅ လကြာ ထပ်မံတိုးမြှင့် ရပ်စဲလိုက်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် မှာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ရွှေပြည်သာ ရပ်ကွက်ရုံး ဗုံးကွဲ
ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာမြို့မှာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် ည ၇ နာရီခွဲလောက်က တ/၁၅ ရပ်ကွက်ရုံးမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲတာဖြစ်ပြီး ထိခိုက်တာတော့ မရှိဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
"အနီးနားဝန်းကျင်က အိမ်တွေပါတုန်တယ်။ တချက်တည်းပေါက်တာ။ နာနတ်သီး(လက်ပစ်ဗုံး)ထင်တယ်။ လူတွေဘာတွေတော့ မထိဘူး" လို့ ဒေသခံတယောက်က ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ရပ်ကွက်ရုံးဟာ လှော်ကားရဲစခန်းနဲ့ တမှတ်တိုင်အကွာအဝေးမှာရှိပြီး လာရောက်စစ်ဆေးတာမရှိခဲ့သလို ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း စစ်ဆေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
MNDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့က ဒေသခံပြည်သူများကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေး
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA)ကိုးကန့်တပ်ရဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါထိန်းချုပ်ကုသရေးအဖွဲ့က မုံးကိုးခရိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး‌ စတင်ထိုးပေးနေတယ်လို့ ကိုးကန့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက သတင်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ အထူးဒေသ (၁)၊ မုံးကိုးခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာပေါင်း ၁၉ ရွာမှာ‌နေထိုင်တဲ့ အသက် ၁၂ နှစ်ကနေ ၆၀ နှစ်ကြားက လူဦးရေ ၇၉၁ ဦးကို ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကိုးကန့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ဆိုပါတယ်။
အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့ဟာလည်း သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေအတွင်းက ပြည်သူလူထုတွေကို တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနေပါတယ်။
MNDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဟာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို ခုခံတော်လှန်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး လက်ရှိလည်း မုံးကိုးဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
၈၈(မျိုးဆက်) ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးဇော်၀မ်းမောင်ကို စစ်ကောင်စီက အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးသွားပြီး သီတင်းတပတ်ကျော်ကြားတဲ့အထိ မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်မရဖြစ်နေပါတယ်။
ဦးဇော်၀မ်းမောင်ဟာ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် နေ့လယ် ၁ နာရီလောက်ကစပြီး အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့အထိ ဘယ်နေရာမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်၊ ဘာကြောင့် ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာ မသိရဘဲ မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇော်၀မ်းမောင်ကို စစ်ကောင်စီတပ်က အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပြင် နေအိမ်ကိုလည်း ချိပ်ပိတ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးဇော်၀မ်းမောင်အနေနဲ့ စစ်ကြောရေးမှာ စစ်တပ်ရဲ့ လူမဆန်စွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ ခံရာမှာကို မိသားစု၀င်တွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ၈၈(မျိုးဆက်) ငြိမ်း/ပွင့် ရုံးအဖွဲ့က ICRC နဲ့ AAPP တို့ထံ ဆက်သွယ် အကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်း နေတိုးစစ်ရေးတိုးချဲ့မှု ရုရှား ဝေဖန်
ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာ နေတိုးရဲ့ စစ်ဘက်အခြေခံအဆောက်အဦတွေကို တိုးချဲ့ချထားတာဟာ ဘောင် ကျော်လိုက်တာပဲလို့ ရုရှားအစိုးရက စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်မှာ ဝေဖန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ရုရှားနဲ့ ဘဲလာရုစ်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ဖို့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
အိမ်နီးချင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာ မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ နေတိုးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့စစ်တပ်တွေ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေတာကို ဘဲလာရုစ်နဲ့ ရုရှားတို့က တနင်္လာနေ့မှာ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန် သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာ နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ မဟုတ်ပေမဲ့ အနာဂတ်မှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပိုနီးနီးကပ်ကပ်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ဒီအကွက်ရွှေ့မှုကို ဘဲလာရုစ်နဲ့ အဓိကမဟာမိတ် ရုရှားက ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ဘဲလာရုစ် သမ္မတကတော့ ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲက အခြေအနေတွေကို ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင်နဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးပြီးပြီလို့ ပြောပါတယ်။
“ယူကရိန်းဟာ နေတိုးအုပ်စုတွေကို ဆွဲသွင်းနေတယ်။ သင်တန်းခန်းမ အယောင်ဆောင်အောက်မှာ တကယ်တမ်းက စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကို ဖန်တီးနေတယ်။ အမေရိကန်ဟာ ယူကရိန်းမှာ အခြေစိုက်စခန်းတွေကို ဖန်တီးနေတယ်။ ဒါကို တုံ့ပြန်ဖို့ လိုအပ်တာ ရှင်းနေတယ်”လို့ လူကာရှန်ကိုက သမ္မတနန်းတော်မှာ အရာရှိတွေနဲ့ အစည်းအဝေးအတွင်း ပြောပါတယ်။
ယူကရိန်းဟာ အရင်အပတ်ကစပြီး အမေရိကန်နဲ့ နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူ ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့တာပါ။
ရုရှားနဲ့ ဘဲလာရုစ် အစိုးရတို့က အကြီးစားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ပူးတွဲလေ့ကျင့်နေလို့ အနောက်နိုင်ငံတွေကို တပ်လှန့်သလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားက ဒုံးကျည် ထပ်မံစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်
မြောက်ကိုရီးယားဟာ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကနေ ပင်လယ်ထဲကို အမျိုးအမည် မဖော်ထုတ်တဲ့ ဒုံးကျည်တစင်း ထပ်မံ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ရထားလမ်းပေါ်ကနေ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်တဲ့ စနစ်သစ်ကို စမ်းသပ်ပြီး သီတင်းပတ် ၂ ပတ် မပြည့်ခင် ထပ်ပြီး စမ်းသပ်ခဲ့တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား စစ်တပ်က ပြောကြားခဲ့ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
အမေရိကန်က မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရအပေါ် ရန်လိုတဲ့ မူဝါဒကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြောက်ကိုရီးယား သံအမတ်က စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်မှာ ဆော်သြအပြီး ခုလို ပစ်လွှတ်ခဲ့တာပါ။
မြောက်ကိုရီးယားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့နဲ့ လက်နက်စမ်းသပ်ဖို့ အခွင့်အရေး ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ဘူးလို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာ မြောက်ကိုရီးယားကို ပိုပြီး တပ်လှန့်စောင့်ကြည့်တာတွေ အဆင့်မြှင့်ထားမယ်လို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှိဟိဒဲ စုငါ့က စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားက ပစ်ခတ်စမ်းသပ်တာဟာ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ဖြစ်နိုင်ပြီး အခြေအနေကို အာဏာပိုင်တွေက အကဲဖြတ် သုံးသပ်နေဆဲပဲလို့လည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားက ပစ်လွှတ်တဲ့ ဒုံးကျည်ဟာ ဂျပန်ပင်လယ်ရေပိုင်နက်ရဲ့ သီးသန့် စီးပွားရေးဇုန် (EEZ) ထဲကို ကျရောက်မှု ရှိမရှိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျရောက်နိုင်ချေကတော့ နည်းတယ်လို့ အစိုးရ သတင်းရင်းမြစ်ကို ကိုးကားပြီး ဂျပန်အခြေစိုက် ချိချိ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က မြောက်ကိုရီးယားဟာ မီးရထားပေါ်ကနေ ဒုံးကျည်စနစ်သစ်ကို ပစ်လွှတ် စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗီယက်နမ်အလယ်ပိုင်းတွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကြောင့် ရေကြီး
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း တျန်းမုက ဗီယက်နမ် ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်ခဲ့အပြီး စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်မှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ငဲ့အန်းပြည်နယ်တလွှား ရေကြီးနေပါတယ်။
ပြည်နယ်တလွှား ရေလွှမ်းနေတဲ့လမ်းတွေနဲ့ ရပ်ကွက်တွေရဲ့ ရုပ်သံကို ဗီယက်နမ်အစိုးရ ရုပ်သံ VTV က ထုတ်လွှင့်ပြသပါတယ်။
တျန်းမုမုန်တိုင်းဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကုန်းတွင်းပိုင်းထဲကို စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် ငဲ့အန်းပြည်နယ်အတွင်း အိမ်ခြေ ၆၀၀ ထက်မနည်းနဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ခင်းတွေ ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ကန်ကျနပူရီခရိုင်တွင် မြန်မာ ၂၂ ဦး ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခံရ၊ ၉ ဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ကန်ကျနပူရီခရိုင်ထဲမှာ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရက်ခြားဆိုသလို ဖမ်းဆီးခံနေရတာမှာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကလည်း နောက်ထပ် ၁၃ ဦး အဖမ်းခံရပြီး ၉ ဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
ကန်ကျနပူရီခရိုင် ကန်ကျနပူရီမြို့ ဘန့်ကောင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ တောအုပ်ထဲမှာ မသင်္ကာ ဖွယ်လူတစ်စုရောက်ရှိနေကြောင်း ရွာသားတွေက အကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် မနက်ပိုင်းက နယ်မြေခံရဲ၊ စစ်တပ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူ သွားရောက်ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ဘန့်ကောင်အုပ်စု နယ်မြေ ၇ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေက မင်္ကာသူတွေရှိရာတဝိုက်ကို လူစုခွဲပိတ်ဆို့ထားပေမယ့် အဆိုပါလူ တွေက သူတို့ကိုလှမ်းမြင်ကတည်းက တောတောင်ထဲကို ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်း ထွက်ပြေးသူတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရာမှာ ၁၃ ဦးသာ ဖမ်းမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မော်လမြိုင် နဲ့ ရန်ကုန်ဘက်ကလာတာဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ ပွဲစားခ တစ်ဦးကို ဘတ် ၂၂၀၀၀ စီပေးရပြီး သူတို့အဖွဲ့မှာ ၂၂ ဦး ဝင်လာတာကာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းဝင်ဖို့ အဆိုပါ တောအုပ်ကနေ အဆက်အသွယ်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းယူထားပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဆိုပါ ဘန့်ကောင်အုပ်စု တောတောင်ထဲမှာပဲ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူ ၁၂ ဦး၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ၁၀ ဦး နဲ့ ၂၃ ရက်နေ့က ၁၄ ဦး ဖမ်းဆီးရမိတာကြောင့် စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ ၂၇ ထိ ၅ ရက်အတွင်း တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၀ နီးပါးအဖမ်းခံရပြီး သူတို့တွေဟာ ပွဲစားခ ဘတ် ၁၆၀၀၀ မှ ၂၂၀၀၀ ထိ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ကိုးကား - #MGR_THAICRIME
မြန်မာကာတွန်းဆရာ ၂ ဦး Robert Russell Courage in Cartooning Award ဆုချီးမြှင့်ခံရ
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ကျရာနေရာက တစိုက်မတ်မတ်ပါဝင်နေကြတဲ့ မြန်မာ ကာတွန်းဆရာတွေဖြစ်တဲ့ ဝေယံ(တောင်ကြီး) နဲ့ လဂွန်းအိမ်တို့ဟာ Robert Russell Courage in Cartooning Award ဆု ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဆုကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ကာတွန်းဆရာများ အခွင့်အရေး ကွန်ရက်(CRNI)က နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီး အခုနှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာကာတွန်းဆရာ ၂ ယောက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ကာ လက်ရှိမှာတော့ ကာတွန်းဆရာ ၂ ယောက်လုံး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ရှိနေတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ကာတွန်းဆရာများ အခွင့်အရေး ကွန်ရက် (CRNI) ကတော့ ကာတွန်းဆရာတွေရဲ့ လူမှုဘဝဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးနိုင်မှုနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးတွေအပေါ် အကာအကွယ်ပေးထားပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီဆုကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တုန်းကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကာတွန်းဆရာ၊ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ အာမက်ဒ် ကာဗီရာ ကာရှောကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး မြန်မာကာတွန်းဆရာတွေကို ရွေး ချယ်ချီးမြှင့်တာကတော့ ဒါက ပထမဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့ ကာလဟာ ၈ လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ဒီကာလတွေအတွင်း အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်း ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့် ကျဆုံးပြည်သူတွေ ထောင်ချီရှိနေခဲ့ပြီး မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူတွေထဲ သတင်းမီဒီယာသမားတွေရော၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သာမန်အရပ် သားပြည်သူတွေအထိ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ (RSF) က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကမ္ဘာ့သ တင်းလွတ်လပ်ခွင့်အညွှန်းကိန်းမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ အနက် အဆင့် ၁၄၀ မှာ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေး–ပြင်ဦးလွင် ရထားသံလမ်းတံတား ဖောက်ခွဲခံရ
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ကန်သာယာရပ်ကွက် ၅၆ လမ်း နဲ့ ၅၈ လမ်းကြား၊ ၁၁၅ လမ်း နဲ့ ၁၁၆ လမ်းအနီးက မန္တလေး–ပြင်ဦးလွင် ရထားသံလမ်းတံတား စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် မနက် ၇ နာရီကျော်အချိန်က ဖောက်ခွဲခံရပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ဖောက်ခွဲခံရပေမယ့် မန္တလေး–ပြင်ဦးလွင် ရထားသံလမ်းတံတား ပျက်စီးတာနဲ့ လူအထိအခိုက် ဒဏ်ရာရ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ကန်သာယာရပ်ကွက်နေပြည်သူတချို့က ပြောပါတယ်။
“ပေါက်ကွဲသံကတော့ အကျယ်ကြီးကြားရတယ်။ အဝေးကကြည့်တာတော့ ပျက်စီးသွားတာ မတွေ့ရဘူး” လို့ ကန်သာယာရပ်ကွက်နေပြည်သူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးမကြာခင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တွေ ရောက်လာပြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ စစ်ဆေးရှာဖွေတာတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကနီမြို့နယ်အတွင်း စစ်‌ကောင်စီတပ်သားများ ထွက်‌ပြေး
ကနီမြို့နယ်အတွင်း စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့က စစ်ကောင်စီတပ်များ တောင်တွင်းချောင် မိုင် ၄၀-၄၅ရှိ ခြေလျှင်ခရီးအဖြစ် နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဝင်ရောက်စဥ် တပ်သား ၁၆ ဦး ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ နယ်မြေခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဆီက သိရပါတယ်။
“ကျနော်တို့ဆီ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်‌နေ့က CDM လုပ်လာတဲ့ စစ်သား ၂ ဦး ရှိခဲ့တယ်။ နယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့ သူတို့လုံခြုံရေးထိခိုက်မှာစိုးတာကြောင့် သတင်းမထုတ်သေးဘဲ နေခဲ့တာဗျ။ အခုတော့ သူတို့ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေစခန်းဆီ ပို့ခဲ့ပြီဗျ။ အတူ ထွက်ပြေးခဲ့တာ သူတို့အပါအဝင် ၁၆ ဦးလို့ ပြောတယ်။ အကုန် နှစ်ယောက်တစ်စု၊ သုံးယောက် တစ်စုခွဲပြီး ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့တော့ ပြောတာပဲ” လို့ ကနီမြို့ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ကနီမြို့နယ်က ထွက်ပြေးပြီး CDM ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်သား ၂ ဦးဟာ ဖြိုးဝေစိုးနဲ့ ဝင်းဇော်ထူးတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကျန်တပ်သားတွေကတော့ ဝင်းကိုကို၊ နေလင်းထွန်း၊ ဟိန်းမင်း၊ ထက်နောင်ထွန်း၊ လက်တင်သောင်၊ စောထူဝါး၊ ရန်နိုင်ထွန်း၊ ထက်လင်းအောင် (ကရင်)၊ ကျော်လင်းဦး၊ အောင်ဌေးကျော် (စနိုက်ဘာ)၊ အောင်ကောင်းမြတ်တို့ ၁၁ ဦးဖြစ်ပြီး ကျန်သူတွေက အမည်မသိရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အခု ထွက်ပြေးလာတဲ့ စစ်သားတွေဟာ မော်လိုက်မြို့ အခြေစိုက် ခမရ (၃၆၅) က ဖြစ်တယ်လို့ ကနီမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးခေါင်ဆောင်ဆီက သိရပါတယ်။
သတင်းပေး ၁ ဦး လုပ်ကြံခံရပြီးနောက် ရေးဒေသခံ အနည်းဆုံး ၅ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် အစင်စံပြကျေးရွာမှာ စစ်ကောင်စီ သတင်းပေး ၁ ဦး လုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက် သံသယရှိတဲ့ ဒေသခံ အနည်းဆုံး ၅ ဦးလောက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
အစင်ကျေးရွာက စစ်ကောင်စီရဲ့ သတင်းပေး ဦးကျော်သူထွန်းကို ရေး PDF ပြောက်ကျားအထူးတပ်ဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က သေနတ်နဲ့ အနီးကပ်ပစ်ခတ်အပြီး သံသယရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာ ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးတာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
ရေးမြို့နယ်မှာ ဒီနေ့အထိ မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရထားသူ အယောက် ၃၀ ကျော်ရှိပြီး ဖမ်းဆီးခံရထားရတဲ့သူတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေ အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ လူငယ်တချို့လည်း ပါရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ရေးမြို့မှာ PDF တွေရဲ့ မကြာခဏ ဗုံးခွဲ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ မြို့အဝင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာ လုံခြုံရေး ပိုတင်းကျပ်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်ကောင်စီ လက်နက်ကိုင်တွေ၊ ရဲတွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေနဲ့ စစ်ကောင်စီကို အကျိုးပြုနေသူတွေရဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြည်သူတွေ နေထိုင်သွားလာတာ မပြုလုပ်ကြဖို့ ရေး PDF က ထပ်မံမေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
ပင်လောင်းမြို့နယ်၌ စစ်ယာဉ်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး အယောက် ၂၀ ခန့် ဒဏ်ရာရ
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပင်လောင်းမြို့နယ် ဆောင်းပြောင်းကျေးရွာအနီး စစ်ကောင်စီ ယာဉ်တန်းကို စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် ညနေ ၃နာရီခွဲက ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF) ဖယ်ခုံတပ်ရင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ကို အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ ထွက်လာတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ၄၅ စီးပါ စစ်ကောင်စီတပ်ယာဉ်တန်း ကလောမြို့မှ ဖယ်ခုံမြို့ဘက်ကို ဆင်းလာစဉ် ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF) ဖယ်ခုံတပ်ရင်းက တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။
ဒီတိုက်ပွဲမှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ အနည်းဆုံး အယောက် ၂၀ ထိခိုက်ဒဏ် ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ KNDF ဖယ်ခုံတပ်ရင်းမှ အထိအခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်း KNDF က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာမှ ဖယ်ခုံမြို့ဘက်သို့ ဆက်လက်ထွက်လာဖို့ ကြိုးစားနေချိန် ဖယ်ခုံမြို့နယ် နဲ့မိုးဗြဲအခြေစိုက် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ရမ်းသန်း ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ပြည်သူအချို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဖယ်ခုံမြို့နယ် ခေါင်းအိ‌ကျေးရွာဘက်ကိုလည်း လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ကောင်စီ အာဘော် မီဒီယာတွေမှာတော့ ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိပါဘူး။
Photo - KNDF
ကံမမြို့နယ် ကျောက်စောင်းကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက စပါးရိတ်သိမ်းခွင့် ပိတ်ပင်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ကံမမြို့နယ် ကျောက်စောင်းကျေးရွာက NLD ပါတီ ထောက်ခံ ဝန်းရံသူတွေကို ကောက်လျင်စပါး ရိတ်သိမ်းခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့် တောင်သူတွေ အခက်ခဲ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီကနေ သိရပါတယ်။
ကျောက်စောင်းကျေးရွာမှာ စစ်ကောင်စီခန့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဇော်မျိုးက ကောက်လျင်စပါး ပေါ်ချိန်မှာ NLD ပါတီထောက်ခံဝန်းရံသူတွေရဲ့ ကောက်လျင်စပါး မှန်သမျှ တစ်ယောက်မှ ရိတ်သိမ်းခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်ထားတာကြောင့် တောင်သူတွေ အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ ဒေသခံရွာသားတစ်ယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေတွေကိုလည်း စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား ပြီးတော့ ပေးဆပ်ဖို့ အတင်းအဓမ္မတောင်းခံနေပြီး ပြန်မဆပ်နိုင်ပါက လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ၇ တွေကို သိမ်းယူမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ကတည်းက ဒီနေ့အချိန်ထိ ကျောက်စောင်းကျေးရွာမှာ တပ်စွဲထားပြီး NLD ပါတီထောက်ခံဝန်းရံတဲ့ သူ ၁၅ ယောက် လောက်ကို ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်နေတာကြောင့် ပါတီဝန်းရံတဲ့သူတွေ ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် ဂန့်ဂေါအဝင်အထွက်လမ်းအားလုံး PDF က ယာယီပိတ်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ဂန့်ဂေါ) နဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ကြား စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက် ဂန့်ဂေါအဝင်အထွက်ကားလမ်းပိုင်းတွေကို ယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ဂန့်ဂေါ) က ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။
စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် ပုလဲ - ဂန့်ဂေါလမ်း၊ ထီးလင်း - ဂန့်ဂေါလမ်း၊ ဂန့်ဂေါ - ဟားခါးလမ်း၊ ဂန့်ဂေါ - ကလေးလမ်း စတဲ့ကားလမ်းပိုင်းတွေကို စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုဘာ ၁ နေ့အထိ ယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အဆိုပါလမ်းပိုင်းတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ လမ်းပိတ်ရက်အတွင်း ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ဂန့်ဂေါမြို့နယ်ထဲမှာ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့လောက်ကတည်းက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီး စက်ကောင်စီဘက်က အများအပြား သေဆုံးသလို ရပ်ရွာကာကွယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ လူငယ်တချို့ ကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကန့်ဘလူမြို့နယ်တွင် ခရီးသွားပြည်သူနှစ်ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ရေအေးကျေးရွာတောင်ဘက်မှာ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ခရီးသွားပြည်သူနှစ်ဦးကို စစ်တပ်က အကြောင်းမဲ့ပစ်သတ်လိုက်တယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
“ငှက်ပျောတိုင်းနဲ့ စပါယ်နံ့သာကြားက ရေအေးကျေးရွာတောင်ဘက်မှာပါ။ ခရီးသွားပြည်သူနှစ်ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး” လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခင်းဖြစ်နေရာဟာ ရွာနဲ့ အလှမ်းဝေးတာကြောင့် ပြည်သူ ၂ ဦးအား စစ်တပ်က ဘာကြောင့် ပစ်သတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးသူတွေကို ကန့်ဘလူ ရဲတွေက ဆေးရုံပို့လိုက်ပြီး ကရုဏာရှင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအသင်းက မီးသင်္ဂြိုဟ်ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခင်းဖြစ်နေရာဟာ ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းမပေါ်မှာ တည်ရှိပြီး စစ်တပ်က စစ်ဆေးရေးဂိတ်လုပ်ကာ ကားဆိုင်ကယ်တွေ တားဆီးစစ်ဆေးနေခဲ့တာ လအတန်ကြာပြီလို့ သိရပါတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် “၃၀၀၀ ကျပ်သာ လှူပေးပါ”ကမ်ပိန်းတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်
မြန်မာပြည်တွင်း အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ဒေသတွေက စစ်ဘေးရှောင်မိသားစုတွေကို ဖေးမကူညီဖို့ Clean Yangon အဖွဲ့ကတဆင့် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း နှိုးဆော်ထားပါတယ်။
“၃၀၀၀ ကျပ်သာ လှူပေးပါ” ကမ်ပိန်းမှာတော့ စေတနာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး စစ်ဘေး ရှောင်ဒေသတွေရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ Clean Yangon အဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က စတင်ကာ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက မတရားအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလဟာ ၈ လနီးပါး ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာလတွေအတွင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့် ထိခိုက်ကျဆုံးရသူတွေ၊ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံရသူတွေနဲ့အတူ နိုင်ငံတဝန်း တောရောမြို့ပါမကျန် ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ် ရေးတပ်တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြား တိုက်ပွဲတွေလည်း ပြင်းထန်နေခဲ့တာပါ။
ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့် အိုးပစ်အိမ်ပစ် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ စစ်ဘေး ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေဟာလည်း တနေ့တခြား ပိုမိုများပြားလာနေပါတယ်။
Clean Yangon အဖွဲ့ကတော့ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့အတူ ရန် ကုန်မြို့တော် သာယာလှပရေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးအတွက် စွန့်ပစ်အမှိုက် အသိပညာပေးရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ထင်ရှားပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးကာလ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း တွေမှာလည်း တစိုက်မတ်မတ် လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ မတရားအာဏာသိမ်းကာလ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ဒေသခံတွေကြား ပဋိပက္ခတွေကြောင့် နေရပ်ဒေသအသီးသီးက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ တထောင့်တနေရာကနေ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပဲယင်းတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာကြား မိုင်တိုင်အမှတ် (၁/၁၂၈) မှာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီလောက်က ယာဉ်တစီး ရေမြောင်းထဲ ထိုးကျတိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
အေဒီဘင်အမျိုးအစား အဖြူရောင်မော်တော်ယာဉ်ဟာ ကားရှေ့မှ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ကလေးငယ်အား တိမ်းရှောင်ရာမှ လမ်းဘေးရှိ ရေမြောင်းထဲကို ထိုးကျတိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီပဲယင်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းက မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် ၁ စီး၊ သန္ဓေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ သွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ယာဉ်ပေါ်ပါ အမျိုးသမီး ၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး အမျိုးသား ၁ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ) ရရှိခဲ့တာကြောင့် ဒီပဲယင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စင်ကာပူက ထိုင်းသို့ AstraZeneca ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ၁၂၀,၀၀၀ ကျော်ပေးပို့
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံက ထိုင်းနိုင်ငံကို AstraZeneca ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ၁၂၀,၀၀၀ ကျော်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ စင်ကာပူနိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
ဒါဟာ နှစ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ဆေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်အရ သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေး ၁၂၂,၄၀၀ အပြင် Rapid Antigen Test Kits ၂ သိန်းနဲ့ Nasopharyngeal Swabs ၅ သိန်းကိုလည်း သဘောတူညီမှုတစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“စင်ကာပူနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေဟာ ကာလရှည်ကြာ ခိုင်မာတဲ့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုဟာ ဒီကပ်ရောဂါကို အတူတကွ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန်ကတိကဝတ်ကို အားဖြည့်ကူညီတာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လတုန်းကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ကာကွယ်ဆေးပြတ်လပ်မှုကြောင့် ဘူတန်နိုင်ငံက AstraZeneca ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ၁ သိန်းခွဲ ချေးယူဖို့ ရှာဖွေနေခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက လာမယ့် အောက်တိုဘာလကစတင်ကာ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝ ထိုးနှံပြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ကွာရန် တင်းလိုအပ်ချက်တွေ ဖြေလျှော့ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေအတွင်း နီပေါ၊ မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်းစတဲ့ တခြားနိုင်ငံ တွေကိုလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထန်တလန် မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီဘက်က ၅ ဦးထက်မနည်း သေဆုံး
ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ထန်တလန် CDF နဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတွေတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီဘက်က ၅ ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ CDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မနက် ၁၀ နာရီကျော်လောက်က ထန်တလန် CDF နဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတွေ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်အုပ်စုဘက်က လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ရမ်းသမ်း ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့် မိမိတို CDF တပ်ဖွဲ့ဘက်က အထိခိုက်အကျဆုံးမရှိဘဲ ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ ပြည်သူပိုင် နေအိမ်တွေ စျေးဆိုင်တွေက ပစ္စည်းတွေကို ခိုးယူဖျက်ဆီးတာတွေ ပြုလုပ်ပါက တွေ့တဲ့နေရာမှာ ပစ်သတ်သွားမယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
ပြည်သူ့စစ်သားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ပြည်သူ့ဘက်ကို ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပါက CDF ထန်တလန် အနေနဲ့ လုံခြုံတဲ့နေရာကို ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ အသိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်က ထန်တလန် CDF နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က စစ်သား ၃၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ထန်တလန် CDF က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်ကောင်စီက သာလွန်အင်အားသုံးပြီး လက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ အပြင်းအထန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သို နေအိမ် ၂၀ လောက်လည်း မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ပဲခူးမြို့တွင် ရာအိမ်မှူးတစ်ဦး လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် အပစ်ခံရ
ပဲခူးမြို့ အင်းဝင်ရပ်ကွက်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ညနေပိုင်းက ဒလန်သတင်းပေးဆိုပြီး လူသိများတဲ့ ရာအိမ်မှူးတစ်ဦး လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ အပစ်ခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အင်းဝင် ၁၃ လမ်းနေ ရာအိမ်မှူး ဦးသက်ဦးဟာ နေအိမ်အတွင်း ညနေ ၄ နာရီလောက် အမည်မသိအဖွဲ့က လာရောက်ပြီး လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ခြေထောက် ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
ဒေသခံတဦးက “သက်ဦးက ဒလန် လို့တော့ နာမည်ထွက်နေတယ်။ ညနေက လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ လာပစ်သွားတာ၊ အိမ်ထဲထိမရောက်ဘူး ရေကပြင်နားမှာ ပေါက်သွားတယ်။ သူကတော့ ပေါင်မှာ ဗုံးစမှန်လို့ ဆေးရုံခေါ်သွားပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဗုံးနဲ့အပစ်ခံရသူ ဦးသက်ဦးဟာ ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်တဲ့ လူငယ်တွေကို ဖမ်းဆီးဖို့ လက်ထောက်ချနေသူတဦးဖြစ်ပြီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပဲခူးမြို့ ဟင်္သာကုန်းရပ်ကွက်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၃ နေ့ကလည်း ကိုစည်သူကောင်းမြတ်နဲ့ သူ့ ဖခင်ဟာ ရပ်ကွက်ရာအိမ်မှူး ဒလန်တစ်ယောက်ရဲ့ မဟုတ်မမှန် သတင်းပေးမှုကြောင့် စစ်ကောင်စီက အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ လာရောက် ဖမ်းဆီးတာ ခံခဲ့ရပါတယ်။
တရက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာသစ် ၁၃၀၀ နီးပါး၊ ၅၆ ဦး ထပ်မံသေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာသစ် ၁,၃၀၀ နီးပါးနဲ့ ၅၆ ယောက် ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်ညပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီစစ်ဆေးမှုဟာ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု(CDM)မှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ ဆေးရုံတွေ၊ ဓာတ် ခွဲစမ်းသပ်ခန်းတွေ မပါဝင်ဘဲ စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံ တပ်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ ရောဂါကူးစက်မှု တိကျတဲ့ ပမာဏအတိုင်းအဆကိုတော့ မသိနိုင် သေးပါဘူး။
ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၁၇,၇၂၅ ခုကို စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၁,၂၈၂ ယောက် တွေ့ရှိခဲ့တာမို့ ပိုးတွေ့နှုန်း ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိနေပါတယ်။
ရောဂါပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာလာလို့ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရသူအရေအတွက်က တော့ ၁,၈၆၆ ယောက်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၇,၅၈၃ ယောက်နဲ့ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၄၅၉,၄၃၆ ယောက် ရှိနေပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်မှုတွေ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် အခုစက်တင်ဘာလ ကုန်အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ကြေညာထားသလို နိုင်ငံတဝန်း စာ သင်ကျောင်းတွေကိုလည်း လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ထပ်မံပိတ်ထားဖို့ ကြေညာထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရောဂါကူးစက်မှုများတဲ့ နိုင်ငံတဝန်း မြို့နယ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ကိုလည်း Stay At Home အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။
စစ်တပ်က ပစ်သတ်ခဲ့သည့် NLD ပါတီဝင်အပါအဝင် ကျဆုံးပြည်သူ ၁၁၃၆ ဦးထိရှိလာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတရားအာဏာသိမ်းကာလ ၈ လနီးပါးအကြာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ပစ် ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ကျဆုံးပြည်သူ ၁၁၃၆ ယောက်ထိ ရှိလာပြီလို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(အေအေပီပီ)က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီစာရင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်အထိ အေအေပီပီက ကောက်ယူမှတ်တမ်း ပြုစုထားတာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ကျဆုံးသူတွေဟာ ဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ပြည်သူ ၈၅၀၄ ယောက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ ၆၈၅၀ ယောက်ကတော့ လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲက ၂၉၃ ယောက်ကတော့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။
အမှုဖွင့်ခံထားရပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက် တိမ်းရှောင်နေသူ အရေအတွက်ကတော့ ၁၉၈၉ ယောက်ရှိနေပြီး သူတို့ထဲက မျက်ကွယ်သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ ၃၉ ယောက်အပါအဝင် ၁၁၈ ယောက်ဟာ မျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရကာ သေဒဏ်ချ မှတ်ခံထားရသူ စုစုပေါင်း ၆၅ ယောက် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ NLD ပါတီဝင်၊ ပရဟိတ သမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုသန်းထွန်းဦး(ခ)ကိုမင်းကိုသိန်း(ခ)ကိုဖက်တီးကို အကြမ်း ဖက်စစ်အုပ်စုက စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့က နေအိမ်မှာ လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ဖမ်းဆီးရာမှာ ကိုသန်းထွန်းဦးကို ဒူးထောက်ခိုင်းခဲ့ပြီး ကိုသန်းထွန်းဦးက သူ့ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်ကြောင့် ဒူးထောက်လို့ မရကြောင်းပြောဆိုတာကြောင့် ဒူးခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ပါးနဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်နှက်ကာ ဒဏ်ရာနဲ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်မှာတော့ ကိုသန်းထွန်းဦး ကျဆုံးကြောင်းကို မိသားစုကို အကြောင်းကြားလာခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ကုန်းသာကျေးရွာမှာ အ သက် ၇၀ အရွယ် ဦးကြီးကျော်ဟာ နေအိမ်အတွင်းမှာ ရှိနေစဉ် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတပ်က ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ရင်ဘတ်ကို ကျည်ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်၊ သာစည်စံပြကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းကို စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတပ်တွေ ဝင်ရောက်တပ်စွဲခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်း အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု(CDM) ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရဲဝန်ထမ်း ကိုဇော်မျိုးထွဋ်နဲ့ ရွာသား ကိုသန်းထိုက်အောင်တို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ သင်္ချိုင်းကုန်းကို ခေါ်ဆောင်ကာ ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်မနက်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိ မှန် တောကျေးရွာကို အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတပ်တွေ ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ရွာသား ၂ ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုစိုးမိုးအောင်နဲ့ ကိုမျိုးမြင့်အောင်တို့ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့အပြင် ရွှေဘိုမြို့နယ်က လာရောက်တိမ်းရှောင်နေတဲ့ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု(CDM) ပြုလုပ်ထားသူ ဆေးမှူး တယောက်လည်း ကျဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အရပ်သားတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ သတင်းသမားတွေ၊ CDM လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ စတဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးက ဘယ်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်း၊ တရားစွဲဆိုခံထားရတာကို သိရှိပါက အေအေပီပီ အီးမေးလ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့ တွစ်တာတို့ကတဆင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားဖို့ အသိပေးထားပါတယ်။